Ruushk (NogobNews) 24/07/2019 Dowlada Ruushka ayaa maanta oo Arbaca ah raali gelin ka bixisay in diyaaradahooda dagaalka ay ku xad-gudbeen hawada wadanka Kuuriyada Koonfureed, sida lagu sheegay warsaxaafadeed kasoo baxay xafiiska Madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed. Salaasadii shalay ayey labo diyaaradooda oo ah kuwa wax duqeeya ee A50 oo laga leeyahay Ruushka ay gudaha usoo galeen hawada
UK: Raysalwasaaraha cusub Boris Johnson oo xilka la wareegaya
London (NogobNews) 24/07/2019 Waxaa maanta oo Arbaca ah lagu wadaa inuu xilka la wareego Boris Johnson oo shalay ku guuleystay loolanka xilka Raysalwasaaraha ee ka dhex dhacay xisbi Xaakimka Conservative Party Mr.Johnson ayaa xubnaha xisbi xaakimka ka helay 92,153 cod halka ninkii la tartamayey ee Jeremy Hunt uu helay 46,656 cod oo kaliya. Boris Johnson
Warbixin : Mas’uuliyiinta ilaa iyo hadda la xaqiijiyay in ay ku geeriyooday qaraxii ka dhacay Aqalka dowladda Hoose
Muqdisho (NogobNews) 24/07/2019 Saraakiil ka tirsan dowladda Hoose ee Xamar ayaa warbaahinta uga waramay khasaaraha ka dhashay qaraxii galabta ka dhacay Aqalka Dowladda Hoose ee Xamar xili uu halkaa ka socday shir Amiga ku saabsan oo ay lahayeen guddoomiyayaasha degmooyinka iyo guddoomiyaha gobolka Eng Cabdiraxmaan Yariisoow.Mas’uuliyiinta ilaa iyo hadda dhimashooda la xaqiijinayo ayaa waxaa ka
Madaxweyne Biixi oo sheegay in guddida Soomaaliya u magacowday wada hadalka aanu khuseyn
Hargeysa (NogobNews) 20/07/2019 Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa sheegay in guddida uu madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Farmaajo uu magacabay aanay iyaga khuseyn, sidaas darteed aanu farogalinayn arrimaha dhexdoodda ah. Sidoo kale, waxa uu sheegay in madaxweyne Farmaajo mudadii uu xilka hayey uu dagaal dhaqaale ku soo qaaday, taas oo uu ku tilmaamay mid cadaawad ah.
Axmed Madoobe: Maanta waxaan qaatay warqada diiwaangalinta musharraxnimo
Kismaayo (NogobNews) 20/07/2019 Madaxweynaha dowlad-gobolleedka Jubbaland, Axmed Maxamed Islaam ayaa maanta shaaca ka qaadday inuu qaatay warqada diiwaangalinta musharrixiinta u tartamaya xilka madaxweynaha Jubbaland. Madaxweynaha Jubbaland ayaa iska diiwaangaliyay xarunta guddi uu horey u magacaabay ee doorashooyinka iyo xaduuddaha,isagoo marka sheegay in uu maray hannaanka sharciga ah ee looga baahan yahay in ay maraan dadka
Mareykanka (NogobNews) 19/07/2019 Madaxweyne Donald Trump ayaa sheegay in ciidammada badda ee waddanka Mareykanka ay marinka Hormuz ku soo rideen diyaarad aanay cidina wadin oo Iiraan ay leedahay. Waxa uu sheegay in markabka USS Boxer “uu isdifaacay” Khamiistii kaddib markii diyaarad aanay cidina wadin ay u soo jirsatay 1,000 yaardi. Iiraan ayaa sheegtay in aanay
Kismaayo (NogobNews) 12/07/2019 Madaxweynaha Jubbaland oo booqday isbitaalka Kismaayo Madaxtooyada Jubbaland ayaa war kasoo saartay qarixii iyo weerarkii maanta ka dhacay hoteel ku yaala Kismaayo, sida hoose ayuuna u qornaa war saxaafadeedka. Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Jubbaland Mudane Axmed Maxamed Islaam ayaa hada booqanaya Isbitaalka weyn ee Magaalada Kismaayo halkaas oo la geeyay dadkii ku dhaawacmay
Kismaayo (NogobNews) 12/07/2019 Wararka ka imanaya magaalada Kismaayo ayaa sheegaya in wali laga maqlayo hoteel Cascaseeey ee weerarka lagu qaaday rasaas goosgoos ah oo ay is weydaarsanayaan kooxo hubeysan ee ciidamada Jubbaland. Ururka Al-shabaab ayaa markiiba sheegay weerarkan oo noqonaya kii ugu culsaa ee noociisa ah oo ka dhaca magaalada Kismaayo oo ay kooxo hubeysan
K/Afrika (NogobNews) 07/07/2019 Ninkan dhalinyarrada ah ee Soomaaliyeed ayaa lagu soo waramayaa in burcad koonfur Africaan ah ku dileen xalay deegaanka lagu magacaabo Naas ee Gobolka Mpumalanga. Murxuumka oo magaciisa lagu sheegay Xuseen Cali Saqiir ayaa lagu waramayaa in lagu dilay dukaan uu ka shaqeynayay halka. Dalka Koofur Afrika ayaa waxaa ku badan dilalka loo
Wasaaradda arrimaha gudaha federaalka oo go’aamo ka soo saartay Doorashooyinka Jubbaland
Muqdisho (NogobNews) 06/07/2019 Wasaaradda arrimaha gudaha,federaalka iyo dib u heshiisiinta dowladda federaalka ayaa goor dhow soo saartay go’aamo cusub oo la xiriira doorashada Jubbaland. Warsaxaafadeed ka soo baxay wasaaradda ayaa lagu sheegay in odayaasha dhanka iyada oo la adeegsaday ee saxda ah in liiskooda ay wada saxiixayaan wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo midda dowlad-gobolleedka Jubbaland.Sidoo
AddisAbaba (NogobNews) 05/07/2019 Sannad uun ka hor, waxaa jirta rajo weyn oo ay qabeen dadka reer Itoobiya – Ra’iisal Wasaare Abiy Axmed ayaa xukunka qabtay waxa uuna markiiba sameeyey isbaddallo waaweyn kuwaas oo wax wayn ka baddalay siyaasadda dalkaas. Balse dhowr bilood kaddib, waxaa dib u bilowday qalalaaso iyo xiisado u dhexeeya qawmiyadaha kuwaas caqabad
Khayre Oo Madaxda Dhaqanka Kala Hadlay Dib U Heshiisiinta Galmudug.
Guriceel (NogobNews) 03/2019 Ra’iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya (XFS), mudane Xasan Cali Khayre ayaa maanta magaalada Guriceel kulan qado ah kula qaatay Ugaas Xasan Ugaas Maxamed Ugaas Nuur Ugaaska iyo Ra’iisul Wasaaraha ayaa ka wada hadlay dowrka dhaqanka ee gogosha dib-u-heshiisiinta Galmdug iyo dib-u-dhiska iyo dhamaystirka hey’adaha dowladeed ee Galmudug. Ra’iisul Wasaare Xasan Cali Khayre
Gini (NogobNews) 03/07/2019 Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi ayaa xalay gaadhay caasimadda dalka Jamhuuriyadda Gini (Guinea) ee galbeedka qaaradda Afrika oo ay marti-qaad rasmi ah ka heleen. Madaxweynaha iyo weftiga uu hogaaminayo waxa gegida caalamiga ah ee Conakry ama Gbessia International Airport ee caasimadda Jamhuuriyadda Gini (Guinea) ku qaabilay wasiirka arrimaha dibadda dalka Gini, Mudane Mamadi
Addisababa (NogobNews) 02/07/2019 Ra’isul wasaaraha Itoobiya dr Abiy Axmed ayaa sheegay inta uu xilka hayey in marar badan la isku dayay in la afgambiyo balse shacabka ay ka war heleen oo keli kii toddobaadkii hore dhacay. Dr Abiy Axmed oo golaha wakiillada shacabka ee dalka Itoobiya hordhigay warbixinta ku saabsan afgambigi dhicisoobay iyo xaaladda uu
London: Safarada Itoobiya Oromo oo Kala Eriday Axmaaro Mudaaharadi
London (NogobNews) 02/2019 Qurbajoogta ku nool dalka Ingariiska gaar ahaan ka soo jeeda dalka Itoobiya gaar ahaan qowmiyadda Amxaarada ayaa dhigay dibadbax ay uga soo horjeedaan ra’iisal wasaaraha dalka Itoobiya waxaa ka yaabiyay oo ka hor yimid oo hor istaagay Qowmiyadda Oromada ayaa waxey ka hortageen islamarkaan ay hor istaageen Amxaaradii u soo diyaar garowday in